Madaxdii hore ee dowlada oo ka qeybgalaya shirka maanta iyagoo ah xildhibaano – idalenews.com
Madaxdii hore ee dowlada oo ka qeybgalaya shirka maanta iyagoo ah xildhibaano
Guddoomiyihii hore ee Barlamaanka Shariif Xasan iyo Ra’iisul Wasaarihii hore ee Somalia Prof. Abdiweli Ali Gaz oo wax masuulyad sare u hayn dalka ayaa si garbo-siman uga qeybgalaya shirka 1aad ee ay yeealan doonaan xubnaha cusub ee barlamaanka, kaasoo la filaayo in saacado kooban ka dib ka fumo xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Caasimada ee Muqdisho.
Kulanka dhaci doona maanta ayaa ninka ugu da’da weyn oo la sheegey inuu 72 sano da’diisu tahay noqon doono shaqsiga si kumeel gaar ah u shir gudoomin doonta inta laga dooranaaya gudooyimaha cusub ee barlamaanka. Guddoomiyihii hore ee barlamaanka Sharif Xasan ayaa ka qeyb noqon doona shirka isagoo un ah xubin ka tirsan barlamaanka.
Soo xulista xubnaha baarlamaanka oo is qabqabsi toddobaadyo socday qaatay ayaa hadda waxa uu u muuqdaa mid soo dhamaanayo hase yeeshee khilaafka dhinaca siyaasada ee u dhexeeya madaxdii sare ee dowlada ayaa soo biyo shubtey loolanka adaga ee xubnaha cusub ee barlamaanka gaar ahaan doorashada gudoomiye barlamaanka iyo mid madaxweynimada Somalia.
Sidoo kale waxaa ka soconaya hotalada iyo dhismayaal kale oo waaweyn oo ku yaal magaalada Muqdisho gulufka siyaasada iyadoo musharixiinta madaxtinimada ay isku dayayaan sidii ay ku heli lahaayeen codadka mudanayaasha baarlamaanka cusub.
Waxaana haatan isu soo taagay musharixnimada madaxtinimada dalka siyaasiyiin faro badan oo mid kasta doonayo inay u tartamaan jagada ugu sareysa ee dalka, madaxda la filaayo iney helaan taageerada inta badan xildhibaandada iyo weliba tan beesha caalamka ayaa lagu soo koobey Prof Abdiweli Ali Gaas iyo Siyaasiga kale Cabdulaahi Axmed Abdow oo 2 jeer oo hore ku guuldareystey jagada hogaanka sare ee dalka.
Xafiiska Warqabadka ee Idale News Muqdisho
Dhaarinta Barlamaanka Cusub iyo Magacaabista Guddiga Doorashooyinka oo Maanta dhaceysa
Madaxweyne Farole oo taageerey howsha Guddiga Farsamada, kana digey in dib loo soo celiyo xubnihii laga saaray liiska barlamaanka